फैसलाबाट बचाइयो | Apg29
जबसम्म मण्डलीको समय पृथ्वीमा रहन्छ, अनुग्
केहि कारणहरुमा केहि मानिसहरु गलत घोषणा गर्छन् कि परमेश्वरले फैसला पठाउनुहुन्छ कि तिनीहरु कानूनको घोषणा गर्छन्। र यस कानूनको कारण उनीहरूले गलत निष्कर्षमा पुग्दछ जब महा संकष्ट भित्र पर्नेछ।
फैसलाबाट रिहा गरियो
रोम:: १-18-१-18 किनभने परमेश्वरले संसारलाई यति माया गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमा विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। १ For किनकि परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई संसारको न्याय गर्न होइन तर संसार उहाँमार्फत उद्धारको निम्ति पठाउनुभयो। १ him. जसले ऊमाथि विश्वास गर्छ उसको दोषी ठहरिदैन तर जसले विश्वास गर्दैन भने ऊ दोषी ठहरिन्छ, किनकि उसले परमेश्वरको एक मात्र पुत्रको नाममा विश्वास गरेको छैन।
यो सम्पूर्ण प्रस context्गले हामीलाई सिकाउँछ कि परमेश्वरले येशूलाई बचाउनको लागि पठाउनुभयो - न्यायबाट हामीलाई बचाउनुहोस्। सबै मानिसहरूलाई दोषी ठहराइन्छ, तर येशूलाई ग्रहण गर्दा न्यायबाट निर्दोष हुन्छन्। यदि कुनै कारणले तपाईं येशू प्राप्त गर्न चाहानु हुन्न भने, तपाईं न्यायमा छोडिनुहुन्छ।
बाइबलको संदर्भले परमेश्वरले न्याय पठाउनुहुन्छ भनेर भन्दैन, तर यो शब्दले भनेको हो कि परमेश्वरले हामीलाई बचाउन र न्यायबाट बचाउनको लागि परमेश्वरले येशूलाई पठाउनुभयो। यो घोषणा गर्न बाइबलीय र भ्रामक छ कि परमेश्वरले अब महामारीहरू (जस्तै कोरोनाभाइरस), मण्डली र अनुग्रहको समयमा युद्ध र विपत्तिहरूको माध्यमबाट न्यायहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ।
हामीले भर्खरै पढेको बाइबल प्रस्गले प्रस्ट पार्दछ कि परमेश्वरले येशूलाई संसारको न्याय गर्न होइन तर यसलाई बचाउन पठाउनुभएको हो।
हो, भगवानले संसारको न्याय गर्नुपर्दैन किनकि यो पहिले नै विनाश भइसकेको छ! र यस निर्णायकबाट निर्दोष भएर मुक्ति पाउन तपाईंले येशूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ र मुक्ति पाउनुहुनेछ।
हाम्रो ठाउँमा कलवरीको क्रूसमा मर्दा येशूले पनि न्याय लिनुभयो र आफैलाई दण्ड दिनुभयो। अब जब येशूले निर्णय लिनुभयो, हामी निर्दोष छौं। र निर्दोष हामी उहाँमा विश्वासद्वारा बन्छौं।
यदि हामी अब येशूको न्यायबाट निर्दोष साबित भएको छ भने, तब भगवानले फेरि हामीलाई न्याय लागू गर्न सक्नुहुन्न। येशू पहिले नै यो दूर बोकेको छ!
केहि कारणहरुमा केहि मानिसहरु गलत घोषणा गर्छन् कि परमेश्वरले फैसला पठाउनुहुन्छ कि तिनीहरु कानूनको घोषणा गर्छन् । र यस कानूनको कारण उनीहरूले गलत निष्कर्षमा पुग्दछ जब महा संकष्ट भित्र पर्नेछ।
यस्तो घोषणा सँगै राख्नको लागि, एउटा महासulation्कष्ट पछि र्याप्चर राखिन्छ, जुन पूरै बाइबलीय छ। त्यस्तै गरी तिनीहरू यो निष्कर्षमा पुगे कि परमेश्वरले रोगहरू, महामारीहरू, युद्धहरू र प्रकोपहरू द्वारा न्याय पठाउनु हुन्छ। तर बाइबलले स्पष्ट रूपमा सिकाउँदछ कि ती चीजहरू परमेश्वरबाट आउँदैनन्।
हुनसक्छ अब एउटा पुरानो नियममा बाइबलको केही ढिलो शब्द भेट्न सकिन्छ, वा नयाँ करारमा नयाँ करारमा भगवानले न्यायदण्ड पठाउँदै हुनुहुन्छ भनेर संकेत गर्न सक्छ, त्यसैले मण्डलीको समयमा तपाईले त्यस्तो कुनै कुरा भेट्टाउन सक्नुहुन्न।
जबसम्म मण्डलीको समय पृथ्वीमा रहन्छ, अनुग्रह लागू हुन्छ। अब कोही येशू आउन र मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ!
यदि तपाईं तिनीहरूलाई र दु: खी घोषणा गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंले यो यहाँ Apg29.nu मा भन्दा कहीं कही गर्नुपर्छ। किनकि यहाँ यस ब्लग साइटमा, येशू ख्रीष्टको सुसमाचार र कसरी मुक्ति पाउने भनेर प्रचार गरिएको छैन - यो हो कि झूठो शिक्षा जुन परमेश्वरले न्याय र दु: ख पठाउनुहुन्छ।
कुनै विश्वास छैन
विभिन्न बाइबल अनुवादहरूले रोमी:: १--4 लाई अनुवाद गरेको छ:
रोमी:: १-। त्यसैले ख्रीष्ट येशूका सदस्यहरूका लागि कुनै सजाय हुनेछैन । २ किनकि येशू ख्रीष्टको जीवनमा लागू हुने आध्यात्मिक व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र पारेको छ। What के व्यवस्थाले गर्न सक्दैन, किनकि यो हाम्रो शारीरिक प्रकृतिबाट छोटो थियो, भगवानले गर्नुभयो। जब उसले आफ्नै छोरालाई पापी मानिस झैं राखियो र उसलाई पापबलिको रूपमा पठाउनुभयो, तब उनले मानिसमा भएको पापको निन्दा गरे। Thus तसर्थ, व्यवस्थाको धार्मिकताका आवश्यकताहरू हाम्रो शारीरिक स्वभावले होइन तर आत्माले बाँचिरहेकाहरूसित पूरा गर्न सकिन्छ। (बाइबल २०००)
रोमी:: १- । ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई अब कुनै दोषी ठह .्याइएको छैन । २ किनकि ख्रीष्ट येशूमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र पारेको छ। The व्यवस्थाको लागि असम्भव कुरा के थियो, यो पापी स्वभावले कमजोर भएको हुनाले, परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई पापबलिको रूपमा पठाउनुभयो, जो बाहिरी भागमा पापी मानिसजस्तो थियो, र उसको शरीरमा परमेश्वरले पापको निन्दा गर्नुभयो। So त्यसोभए व्यवस्थाको आवश्यकता हामीमा पूरा हुन्छ जो शरीरको पछि लाग्दैन तर आत्माको पछि लाग्छ। (रूपान्तरित)
रोम 8: १-।। यसैले, अब जो-जो ख्रीष्ट येशूका साथ छन् उनीहरूलाई दोषी ठहरिएको छैन , जो शरीरको अनुसरण गर्दैनन्, तर आत्माको पछि लाग्छन्। २ किनकि ख्रीष्ट येशूमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र पारेको छ। The किनकि व्यवस्थाको लागि कुन कुरा असम्भव थियो, किनकि यो शरीरबाट कमजोर थियो, त्यसरी नै परमेश्वरले पनि आफ्ना पुत्रलाई पापी शरीरको समानता र पापको खातिर शरीरमा पठाउने पापको निन्दा गर्नुभयो। हामीमा जो शरीरको पछि लाग्दैनौं, बरू आत्माबाट बाँच्दछौं। (KJV)
V 03, tisdag 19 januari 2021 kl 07:07